WARARKA BARAAWEPOST aRBACA 16 JANUARY 2008
XASUUSIN: FADLAN JOOJIYA QORAALLADA XUMAANTA ABUURAYA
Inta aan u guda gelin ujeeddada qoraalkayga, waxaan jeclaan lahaa inaan xasuusiyo dadka isku mashquulinaya qoraallada aan faaidada lehayn ee beryahan buux dhaafiyay shabakadaha Baraawapost iyo SSunion dhibaatada dhabta ah ee ka jirta dalkeenna guud ahaan iyo gaar ahaan degmadeena Baraawe.
Waan wada ogsoon nahay in dalka Somaaliya gebi ahaanba burburiyey dagaalkii sokeeye ee bilowday sannadka 1990. Ilaa taariikhda maanta waxaa dalka ka jira nabadgeliyo la’aan, dhaqaale xumo, caafimaad darro iyo tacliin la’aan iyo dadkii oo gaajo iyo cudurro ay laaynayaan. Degmadeena Baraawena dhibaatooyinkaas iyo weliba kuwa ka daran ayaa ka jira oo ay dadkeennu la tabaalaysan yihiin.
Haddaba annagoo la socono arrimahaas ayaan bilownay inaan iska dicaayadeeyno oon cay iyo aflagaado dhexdeena ah aan ku soo qorno internetka oo ay umad walba akhristaan. Qoraaladani maha kuwa wax usoo faaidaynaya dadkeena dhibaataysan ee reer Shangamaas, Laba tol, iyo Tunnitoore meel kasta ha joogaan waana arrin khatar wadata oo haddii aan laga hortagina keeni karta colaad iyo kala qaybsanaan hor leh oo soo dhex gasha dadkeena reer baraawe. Taas waa arrin aad u fool xun oo aanan u dulqaadan karin haddii aan nahay odayaashii beesha. Mana ogolaanayno dad dana gaar ah wata in ay umaddeena magac xumo usoo jiidaan ciday doonaan ha ahaadeen.
Haddaba ujeedadaydu ma aha in aan cid gooni ah taageero ama aan qofna u hiiliyo ee ujeedadaydu waa in aan idin xusuusiyo in aan nahay dad dadkoodii dhibaataysan oo aan ubaahan nahay in aan ku fekerno sidii dadkaas wax loogu qaban lahaa ee maha in dadka lakala qaybiyo oo colaad hor leh la dhex dhigo. Haddaba waxaa haboon inaan raadino sida loo xallin lahaa arrimaha kor ku xusan, oo siiba in dadka wax wanaagsan lagu soo kordhiyaa hadii aan taas la samyn karina ugu yaraan in aan dhib hor leh loo keenin.
Sida iska cad, qoraalada beriyahan lagu soo qorayo websiteka Baraawapost iyo SSunion waxay ku saabsan yihiin waa dan shaqsiyadeed oo ah in la helo jagada suldaannimmada. Doodana waxa ay ku saabsan tahay dadka qaarkood oo taagersan magacaabidda, kuwa qaarkoodna ay ka soo horjeedaan. Balse waxa la is dhaafsanayo waa hadallo aan wanaagsanayn oo nidaamka feker is dhaafsiga ka baxsan. Run ahaanti waxaa la iloobay dadka masaakiinta ee ku nool degmada Baraawe oo aad iyo aad u dhibaataysan una baahan taakulo dhinac walba leh sida dhaqaalaha, caafimaadka iyo tacliinta. Dadka reer Baraawe qaarkood ee ku nool Ameerika, Kanada, Europeiyo meelaha kale ee dalka dibaddisa dareenkii ayaa ka dhumay oo dhibaatadii waa la iloobay.
Midda kale, waxaad xusuusnaataan oo kale in dhibaatada aysan heysan dadkeena ku nool dalka gudihiisa oo keliya ee balse kuweena qurbaha joogana ay dhibaato culus haysato. Taas oo ah in ay qoysaskii ay lumayaan mustaqbalkeenuna uu aad u liito waayo haddii aan la helin qoys tayo wanaagsan leh iyo tarbiya wanaagsan iyo tacliin aan la siinin ubadkeenna waddaman ku koraya in bur bur uu umaddeena ku soo socdo. Dalalka aan qaxooti ku nahay waa dalal aan isku diin iyo dhaqan ahayn. Marka waxan lanooga baahan yahay in aan ku mashquulno sidii aan jiil taya wanaagsan iyo aqoon leh aan usoo saari lahayn oo mustaqbalka dadkeena dhibaatada ka saari kara iyo in wixii karaankeena ahna aan caawino dadkeena wadanka ku dhibaataysan. EE FADLAN HA LA JOOJIYO HADALLADA AAN WAX TARKA LAHAYN EE DADKEENA KALA QAYBINAYA. Waxaan ilaahay ka barinaynaa in uu ku hanuuniyo ilmaheena diintayna islaamka iyo dhaqankeena “AMIIN”.
Waxaa kale qoraalkan racsinaaya faalo gaaban ee ku saabsan magacaabidda jagada suldaannimada. Suldaanimada meelo badan ayay ka jirtaa adduunka, waxayna ku timaadaa dhaxal ama doorasho ay dadka doortaan suldaankooda. Marka suldaan kasta dalka gudahiisa ayuu ka taliya. Suldan kasta waxu jooga dalka gudahiisa, ma jiro suldaan awood leh oo banaanka dalkiisa ka jooga. suldaanka dalkiisa ka maqan waa kan la inqilaabay. Ree Baraawe way fiicantahay inay helaan suldaan sida ay hore u qabeen, laakin waa in uu dalka iyo dadkiisa dhaxjoogaa. Sababtoo ah suldaanka waxaa laga rabaa in uu dadkiisa caawiyo, iyo inuu siiyo wixii talooyin ku saabsan sidii loo xallin laha dhibaata kasta oo dadka haysata.
Waxaan kaloo ka codsanayaa mas’uuliyiinta websiteyada Baraawapost iyo kuwa SSUnion in ay oggolaanin in websitekooda lagu soo qoro maqaalo dadka reer baraawe sumcadooda wax loogu dhimayo oo dadka akhrisanayaana aan wax faa’ida ah u lahayn. Haddii aad maqaaladii foosha xumaa ee la isku dicaayadaynayay aad ogolaataan in ay sii socdaan sumcad xumo ayay u tahay websiteyadiina iyo reer Baraawe guud ahaan.
Ugu dambeys, shakhsiyaadkii ka danbeeyay maqaaladani aan wanaagsanaynin waxaan kula talalinaayaa inay joojiyaan qoraallada aan faa’idada lehayn. Waxaan kula talinaayaan haddii ay wax qoris jacayl ka tahay inay soo qoraan maqaalo qiimo iyo tayo leh oo dadka wax kusoo kordhiya isla markaasna ay ahmiyadooda saaraan sidii loo heli lahaa xallinta dhibaatooyinka ka taagan degmada Baraawe. Cida doonaysa suldaanimana waa in ay wadanka ku laabtaan ayna kasbadaan kalsoonida dadkooda taas oo ku iman karta keliya in dadka si hagar la’aan ah loogu shaqeeyo.
Waxa qoray: Xassan Cabdow Munye